Ny famerenana ny Pixel amin'ny vidiny lafo dia fanao iray voarara amin'ny Google | Androidsis
Toy ny varotra tselatra any Shina miaraka amin'ireo Xiaomi ireo iza no manana a ferana ny isan'ny singa Mba hampitomboana ny fientanentanana momba ilay fitaovana, any Etazonia dia maro ny mpivarotra ny Pixel izay, fantany fa tsy misy tahiry intsony, dia nanararaotra namidy ireo terminal novidiny.
Ireo hetsika ireo dia mifanohitra amin'ny fehezan-dalàna momba ny serivisy Google ary vitsy dia vitsy no nahita ny azy Naato ny kaonty Google. Ity karazana fanao ity dia tsy misy fetra any amin'ny firenena sasany izay itondran'ireto mpividy ireto ihany ny vokatra izay sarotra kokoa ny mahita azy amin'ireny faritra ireny, fa rehefa misy vokatra azo vidiana tsy misy olana dia miova ny zavatra.
Ity hetsika ity dia notaterina voalohany tao amin'ny tranokalan Dan's Deal. Izany dia nanambara fa nanomboka nahazo mailaka avy amin'ny olona Hitan'izy ireo fa voasakana ny kaonty Google azy ireo. Ireo tatitra rehetra ireo dia avy amin'ireo izay nividy telefaona Pixel ary avy eo nandefa azy ireo tany amin'ny mpivarotra any New Hampshire izay nandoa tombony kely ho azy ireo, alohan'ny hamarotana ireo telefaona ireo amin'ny hafa. Ny tatitra dia manamafy fa kaonty Google 200 no voakasik'izany.
Nisy mpitondra tenin'ny Google namoaka ity fanambarana ity:
Nisy tetika iray nahitana izay nangatahana ny mpanjifa hividy fitaovana Pixel amin'ny anaran'ny mpivarotra iray, izay avy eo ny vidin'ireto fitaovana ireto dia niakatra hahafahana mamerina azy ireo amin'ny mpanjifa hafa. Noraranay ny fivarotana indray ny fitaovana novidina tamin'ny alàlan'ny Project Fi na ny Google Store mba hahafahan'ny tsirairay manana fotoana mitovy mividy fitaovana amin'ny vidiny mirary. Ny sasany amin'ireo kaonty mihantona dia noforonina ho an'ny tanjon'ity tetik'asa ity ihany. Taorian'ny famotopotorana ny toe-javatra dia naverina tamin'ny laoniny ny fahazoana kaonty tena izy ho an'ireo mpanjifa nahita fa voasakana ny serivisy Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Mpivarotra Pixel maro no mampiato ny kaonty Google azy ireo
Afaka manao veloma ny Android 8 avy amin'ny valin'ny fikarohana Google ianao izao